Roald Dahl akazvarwa makore zana apfuura nhasi | Zvazvino Zvinyorwa
Zvakaitika musi waGunyana 13, 1916 saka nhasi uno Makore zana kubva Roald Dahl aberekwa, Briteni munyori wemabasa evose vana nevakuru. Mabhuku ake anozivikanwa ndeapi "Matilda", "Charlie neChokoreti Fekitori", "Varoyi" y "Nyaya yezvisingatarisirwi", pakati pevamwe vazhinji.
Aive munyori ane ruzivo nekuti aigona kunyora zvese: nhetembo dzevana, chirevo, nyaya pfupi, mabasa ehupenyu, yemitambo uye kunyangwe zvinyorwa zvemufirimu.
1 Hupenyu nebasa
1.1 Anoshamisa mabasa
1.2 "Charlie neChokoreti Fekitori"
2 Roald Dahl Mitsara uye Mapfupi Quotes
Sezvatakambotaura pakutanga aive munyori weBritish asi wake zvakabva Era ChiNorwegian, nyika yaaizoshandisa chikamu chikuru chezororo rake rehudiki.
Hupenyu hwake hwakanga husiri nyore: baba vake vakafa aine makore matatu chete, masvondo matatu mushure mekunge hanzvadzi yake Astri afa zvakare neappendicitis; akagamuchira dzidzo yeChirungu yakasimba, isingabhadhare (yaive chishuwo chababa vake kuti adzidziswe muzvikoro zveChirungu kwete zveNorway); kukundikana muzvidzidzo; vakapinda muHondo Yenyika II semutyairi wendege, kwaakarohwa nekupfurwa pasi mundege yake zvichikonzera kukuvara kwakanyanya zvekuti akadzoserwa kumusha; Pane imwe nguva akaroora muAmerican mutambi Patricia Neal, mwanasikana wake Olivia akafa aine makore manomwe chete encephalitis uye Theo, mwanakomana wake, akatambura tsaona yemumugwagwa ingakonzeresa hydrocephalus.
Akafa muna 1990 muguta reOxford, yeleukemia.
Kana tikatanga kutumidza rimwe nerimwe remabasa akanyorwa naRoald Dahl, hatingazopedze, saka tinokusiyai ane mukurumbira uye akakosha, ayo akaita kuti azivikanwe kwete chete semunyori asiwo kuti isu tinoramba rangarira iye nhasi, makore zana gare gare.kuzvarwa kwake:
"Danny, shasha yepasirese"
"The mashiripiti munwe"
"Matilda, nyaya yemusikana anodanana nemabhuku"
"Charlie neChokoreti Fekitori"
"Ndeipi tsvina inonyangadza"
"Iyo gava hombe"
"Mushonga unoshamisa waJorge"
"Hukuru hunhu hwakanaka"
"Ngano mundima yevana vakaipa"
"Mumiriri akataura kumashure"
Iri ibhuku rinozivikanwa kwazvo remunyori uye chikamu che "kukanganisa" firimu rakagadzirwa nezvazvo. Bhuku raive rakabudiswa muna 1964, kupfuurisa 13 mamirioni emakopi pasirese pasirese uye akashandurwa muhuwandu hwe Mitauro 32. Asi zvakatova kusvika 2005 apo director wefirimu Tim Burton Akaona hukuru hweiri basa rekunyora. Chidzidzo chakazara kune vese mudiki uye mukuru.
Mwana anogara muhurombo, mune imba ine makamuri maviri chete, nevabereki vake nasekuru nasekuru, anogara achigamuchira kamwechete chokoreti bhawa kwezuva rake rekuzvarwa. Padhuze nepamba pake, hofori hombe yekokoreti inoratidzira rwendo rwakatungamirwa nemabhawa mashanu kune chero anowana mubairo mune imwe yeanomonera.
Roald Dahl Mitsara uye Mapfupi Quotes
Vampires vanogara vari varume. Uye zvakafanana zvinoenda kumabhonzo. Uye zvese zvine njodzi. "Asi hapana mumwe wedu ane ngozi semuroyi chaiye."
"Hazvina basa kuti uri ani kana kuti wakaita sei, chero bedzi mumwe munhu achikuda."
Zvese zviri mumba umu zvinodyiwa. Kunyange ini ndiri. Asi icho chingave chinodya nyama, vana vanodiwa, uye chinotarisirwa munzvimbo zhinji. ("Charlie neChokoreti Fekitori").
Iye asingatendi mune zvemashiripiti haazozviwana.
"Nhoroondo yehupenyu ibhuku rinonyorwa nemunhu nezve hupenyu hwake uye rinowanzo zara nemhando dzese dzinoshoreka."
"Kana uchironga kuenda chero kupi muhupenyu, unofanirwa kuverenga mabhuku mazhinji."
"Vakuru zvisikwa zvizere nekufungira uye zvakavanzika."
«Munyika hapana chakaipa kupfuura kugara pamberi peterevhizheni. "Zvinotokurudzirwa kubvisa zvachose chinhu chinosemesa." ("Charlie nengano yekokoreti").
Usakanganwa kuti varoyi vane mashiripiti muzvigunwe zvavo uye simba redhiyabhorosi muropa ravo. Vanogona kuita matombo kusvetuka kunge matatya uye kuita kuti rurimi rwemoto rudariki pamusoro pemvura. Aya masimba emashiripiti anotyisa. Neraki, hapana huwandu hwakawanda hwevaroyi munyika nhasi. Asi pane zvimwe zvakakwana kuti utye iwe. ("Varoyi")
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Roald Dahl akazvarwa makore zana apfuura nhasi
Chiso chitsva cheCervantes